Mkpughe E Kpugheere Jọn 17:1-18
17 Otu n’ime ndị mmụọ ozi asaa ahụ, ndị ji efere asaa ahụ,+ wee bịa sị m: “Bịa, m ga-egosi gị ikpe ahụ a mara oké nwaanyị akwụna ahụ nke nọ ọdụ n’elu mmiri na-asọ ike ike,+ 2 onye ya na ndị eze ụwa kwara iko.*+ E mekwara ka mmanya ya, nke nọchiri anya iko ọ na-akwa, na-egbu ndị bi n’ụwa.”+ 3 Mmụọ ozi ahụ wee buru m n’ike mmụọ nsọ baa n’ala ịkpa. Ahụkwara m otu nwaanyị nke nọ ọdụ n’elu otu anụ ọhịa nke na-acha uhie uhie.* Aha e ji ekwulu Chineke jukwara n’ahụ́ anụ ọhịa ahụ. O nwekwara isi asaa na mpi iri. 4 Nwaanyị ahụ yi ákwà na-acha pọpụl+ na ákwà na-acha uhie uhie. O jikwa ọlaedo na nkume dị oké ọnụ* na nkume pel chọọ onwe ya mma.+ O bukwa iko ọlaedo n’aka. Ihe juru n’iko a bụ ihe ndị rụrụ arụ na ihe ndị na-adịghị ọcha o ji akwa iko.* 5 E dere otu aha dị omimi n’egedege ihu ya. Aha ahụ bụ: “Babịlọn Ukwu, nne ụmụ nwaanyị akwụna+ na nne ihe ndị rụrụ arụ dị n’ụwa.”+ 6 Ahụkwara m na ọbara ndị nsọ na ọbara ndị àmà Jizọs na-egbu nwaanyị ahụ ka mmanya.+ Mgbe m hụrụ ya, o juru m nnọọ anya. 7 N’ihi ya, mmụọ ozi ahụ gwara m, sị: “Gịnị mere o ji ju gị anya? M ga-akọwara gị ihe dị omimi gbasara nwaanyị ahụ+ na anụ ọhịa ahụ ọ nọ ọdụ n’elu ya, nke nwekwara isi asaa na mpi iri.+ 8 Anụ ọhịa ahụ ị hụrụ dịbu adị, ma ọ dịghịzi, ma ọ ga-esikwa n’abis* gbagote,+ a ga-ebibikwa ya. Mgbe ndị bi n’ụwa, ndị a na-edeghị aha ha n’akwụkwọ mpịakọta nke ndụ,+ malite mgbe a tọrọ ntọala ụwa, ga-ahụ otú anụ ọhịa ahụ si bụrụ nke dịbu adị, ma ọ dịghịzi, ma bụrụ nke ga-adị, ọ ga-eju ha anya. 9 “Ọ bụ onye ma ihe ga-aghọta ihe a: Isi asaa ahụ+ pụtara ugwu asaa, bụ́ ebe nwaanyị ahụ nọ ọdụ. 10 Ha pụtara ndị eze asaa: Ise adaala. Otu nọ ugbu a. Nke ọzọ abịabeghị. Ma mgbe ọ ga-abịa, ọ ga-anọ obere oge. 11 Ma anụ ọhịa ahụ nke dịbu adị, ma ọ dịghịzi,+ bụ eze nke asatọ. O sikwa na nke asaa ahụ pụta. A ga-ebibikwa ya. 12 “Mpi iri ahụ ị hụrụ pụtara ndị eze iri, ndị na-achịwabeghị, ma ha na anụ ọhịa ahụ ga-anata ikike ịchị otu awa. 13 Obi ndị eze ahụ bụ otu. Ọ bụ ya mere ha ji nye anụ ọhịa ahụ ike na ikike ha. 14 Ndị eze ahụ ga-alụso Nwa Atụrụ ahụ agha.+ Ma Nwa Atụrụ ahụ ga-emeri ha,+ n’ihi na ọ bụ Onyenwenụ kacha ndị nwenụ niile na Eze ndị eze.+ Ndị so ya ga-emerikwa ha, ya bụ, ndị Chineke kpọrọ, ndị ọ họọrọ, na ndị jisiri ya aka ike.”+ 15 Ọ sịkwara m: “Mmiri ahụ ị hụrụ, bụ́ ebe nwaanyị akwụna ahụ nọ ọdụ, pụtara agbụrụ dị iche iche na ìgwè mmadụ na mba dị iche iche na ndị na-asụ asụsụ dị iche iche.+ 16 Mpi iri ahụ+ na anụ ọhịa ahụ+ ị hụrụ ga-akpọ nwaanyị akwụna ahụ+ asị, nara ya ihe niile o nwere ma gbaa ya ọtọ. Ha ga-erikwa anụ ya ma kpọọ ya ọkụ kpamkpam.+ 17 N’ihi na Chineke mere ka imezu nzube ya dịrị ha n’obi,+ ya bụ, ka ha jiri otu obi nye anụ ọhịa ahụ alaeze ha,+ ruo mgbe a ga-emezu ihe Chineke kwuru. 18 Nwaanyị ahụ+ ị hụrụ pụtara obodo ukwu ahụ nke na-achị ndị eze na-achị ụwa.”